Auto Wheel Stud Pilot Pin, Titanium Ruvara Tire Positioning Pin Wheel Inokodzera Mota Rori, China Auto Wheel Stud Pilot Pin, Titanium Ruvara Tire Positioning Pin Wheel Yakakodzera Mota Rori Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - World Hardware Technology Co, Ltd.
Imba>Products>Zvimwe Zvikamu zveMatare>Pins
Auto Wheel Stud Pilot Pin, Titanium Ruvara Tire Positioning Pin Wheel Yakakodzera Mota Rori
Chinyorwa: Titanium, Carbon Simbi, Alloy Simbi, Stainless Simbi, Brass, nezvimwe
Kurapa / Kupedza: Plain, Zinc Yakaiswa (Yakajeka / Bhuruu / Yero / Nhema), Nhema oxide, Nickel, Chrome, HDG
Maitiro: CNC Machining, Kutendeuka, Kugaya, Kupisa Kwechina, Cold Kuchengeta, nezvimwe
Zvinodikanwa: Kwete Burrs 、 Kukwanywa 、 Kutsemuka 、 Makomba.
Kushanda: Zvemotokari uye zvimwe ..
Kurongedza: hombe + bhokisi + pallet, diki bhokisi + katoni + bhokisi.
Isu tinogadzira mugove weasina-muyero uye akagadzirwa kudhirowa zvekubatanidza, pamwe neaya akagadzirwa kubva kune zvekunze zvinhu.
Product zita Tire Positioning Pini
zvinhu Titanium, Carbon Simbi, Alloy Simbi, Stainless Simbi, Brass, nezvimwe
Yakagadzirwa yepamusoro simbi isina simbi, kuomarara kwakasimba, kwete nyore kukuvadza. High tembiricha nemishonga, ngura nemishonga uye ane refu upenyu basa. Zvimwe zviri nyore kuti tayi nehubhu vhiri zvidzoserwe panzvimbo yepakutanga pasina kutsauka kwechinzvimbo.
Yakavakirwa kune yakasimba yemhando yekudzora zviyero, dhizaini yakavandudzwa kuti iwedzere kugadzikana.
Mashandisiro ekushandisa ichi chigadzirwa?
Paunenge uchida kuisa vhiri, isa ichi chigadzirwa kune vhiri hub, wobva waturika tai pane rino bhaudhi. Mushure meizvozvo, iwe unongofanirwa kushandura kona yevhiri kuitira kuti gomba rekumhanyisa kwetayi riwirirane negomba riri mumuzinda.